डा. सुरज कुमार गुप्ता भन्छन्: ‘चीसो नखानू, प्रदूषण बढेको बेला धुम्रपान गरे ज्यानै जानसक्छ’ - Artha Path Artha Path
डा. सुरज कुमार गुप्ता भन्छन्: ‘चीसो नखानू, प्रदूषण बढेको बेला धुम्रपान गरे ज्यानै जानसक्छ’
काठमाडौं । वायु प्रदूषणका कारण उकुसमुकुस बनेको वातावरण । खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका नाममा खोतलिएका सडकहरुबाट उड्ने धूलोको उस्तै समस्या । घरबाट बाहिर निस्किँदा विषाक्त प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने, जिउ चिलाउने जस्ता समस्या धेरै काठमाडौंबासीको साझा समस्या बनिरहेको बेला कोरोनाको दोश्रो लहर तीव्र बन्ने त्रास पनि उस्तै छ । सबैतिरबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुने वातावरण बनिरहेको बेला चिसो खानेकुरा त्याग्न, ध्रुमपान नगर्न, मर्निङवाकमा नजान विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन् ।